Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Xukuumada Somalia oo sheegtay in aqoonsiga ay ka heshay Maraykanka uu xoojinayo midnimada dalka
Xukuumada Somalia oo sheegtay in aqoonsiga ay ka heshay Maraykanka uu xoojinayo midnimada dalka
Jan 23, 2013 SOMALI NEWS 0
Wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumada Somalia C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in aqoonsiga dhowaan dowladiisu ay ka heshay Maraykanka uu muujinayo sida caalamku uga soo horjeedo in dalka la kala jarjaro.
Isagoo boqolaal dadweyne ah kula hadlayey magaalada Muqdisho maalintii shalay ayaa wasiirku waxaa uu intaa ku daray in midnimada ummada Soomaaliyed ay tahay muqadas lama taabtaan ah Soomaaliyana ay tahay hal dal oo aan la kala jari Karin.
“Dowlada Soomaaliyed waxay xoogga saartay in la ilaaliyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo inaan dalka la kala jarjarin taasna wey ku guuleystay caalamkana waa ku taageeray, aqoonsiga Maraykankana waxaa uu astaan u yahay in caalamku uu doonayo Somalia oo mid ah” ayuu intaa ku daray wasiirka arrimaha gudaha Somalia.
Maraykanka ayaa dhowaan sheegay inuu si buuxda u aqoonsaday dowlada federaalka Somalia, uuna hadda ka dib wixii soomaalida ku saabsan uu iyada u sii mari dooni, wuxuuna xusay iney meesha ka baxeen masmulada Soomaalida ee uu la macaamili jiray sida Somaliland iyo Puntland.
Maamulka Somaliland oo muddo 20 sano ka badan sheeganayey iney Somalia ka go’een ayaa tilmaamay in aqoonsiga maraykanku siiyey Somalia uu dharbaaxo ku yahay dedaalkii ay ugu jirtay iney hesho aqoonsi buuxa oo ku saabsan gooni isu taageeda kaasoo ay in muddo ahna dedaal iyo baadi goob xoogan ugu jireen
Socdaalkii UGAASKA Samaroon Ee Magaalada Saylac Qurbajooga reer saylac UK oo taageeray Muse carab iyo Maxamed jamac Abgaal.